Vivo V11 Pro dia naseho tao amin'ny tranonkalan'ny orinasa | Androidsis
Ny Vivo V11 Pro dia naseho tao amin'ny tranonkalan'ny orinasa alohan'ny nanombohany
Ny Vivo V11 Pro dia vao navoaka tao amin'ny tranonkala ofisialin'ny orinasa miaraka amin'ny famolavolana sy ny pitsopitsony teknika. Vao nitranga izany talohan'ny nanombohany tamin'ny fomba ofisialy, izay kasaina ho amin'ny 6 septambra.
Teo aloha, ity angon-drakitra ity dia antenaina hivoaka amin'ny andro hanombohany. Na izany aza, tsara ny mahafantatra izay nomanin'ny marika sinoa ho antsika amin'ny herinandro voalohan'ny volana septambra.
Araka ny efa navoaka, Ny Vivo V11 Pro dia manana efijery Super AMOLED lehibe 6.41-inch lava. Ity dia vahaolana FullHD + ary miaraka amina notch minimalist eo an-tampony, amin'ny fomban'ny Oppo F9 Pro. Ho fanampin'izay, manana sensor fantsom-pifandraisana mifangaro izy, araka ny nandrasana.
Eo ambanin'ny hood Ny finday manaraka an'ny orinasa dia mirehareha amin'ny processeur Qualcomm Snapdragon 660 octa-core, izay afaka mahatratra ny hafainganam-pandeha avo lenta. 2.2 GHZ misaotra ireo coro Kyro 260. Mandritra izany fotoana izany, ity chipseta ity dia miaraka amina memoara 6 GB RAM sy toerana fitehirizana anatiny 64 GB, izay azo hitarina amin'ny microSD hatramin'ny 256 GB. Etsy ankilany, mitazona azy hatrany amin'ny batterie mahazaka 3.400 mAh miaraka amin'ny fanohanana ny famahanana haingana.
mifandraika: Hanomboka amin'ny 11 septambra ny Vivo V6 Pro
Ao amin'ny fizarana sary, ny finday dia manana sensor roa aoriana misy ny vahaolana 12 sy 5MP miaraka amin'ny Dual Pixel. Eo aloha dia mitondra fakantsary 25-megapixel miaraka amin'i AI hanaovana selfie, antso an-tsary ary famohana ny tarehy, na amin'ny alina aza, hoy ny orinasa.
Farany, mitombina ny famerenana izany ny smartphone dia hatolotra amin'ny fomba ofisialy amin'ny 6 septambra. Amin'io andro io dia hipoitra ny toetra hafa, toy ny refy, ny lanjany ary ny antsipiriany hafa, araka ny nandrasana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Vivo V11 Pro dia naseho tao amin'ny tranonkalan'ny orinasa alohan'ny nanombohany